PDF TTIHNUNG AN SI CANG, KHUABAWI ATHATTU CU KANMAH KAN SI AN TI CANG – The Chinlung Post
Ralhrang kawl Ralkap nih rian an khinhmi khuabawiathattu cu kan mah kan si tiah Tenhse PDF lei nih thawng an thanh. Tanhse peng Paw Oo ah ralhrang kawl ralkap nih khuabawi rian an khinh mi U Ye Htun cu tuzing suimilam pasarih hrawng ah Tenhse People Defense Force hnatlak nak in kan thah miasi tiah PDF lei nih thawng an thanh.
Kawlca in relchih:စစ်ကောင်စီခန့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို သတ်ပစ်မှု ၄င်းတို့လက်ချက်ဟု တန့်ဆည်ပြည်သူ့ရဲဘော်အဖွဲ့ကြေညာ. တန့်ဆည်မြို့၊ ပေါ်ဦးရပ်မှ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခန့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးရဲထွန်းဆိုသူကို ယနေ့ နံနက် ၇နာရီခန့်က တန့်ဆည်ပြည်သူ့ရဲဘော်အဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း တန့်ဆည်ပြည်သူ့ရဲဘော်အဖွဲ့က ကြေညာသည်။ တန့်ဆည်ပြည်သူ့ရဲဘော်အဖွဲ့အနေနှင့် မေလ ၂၉ရက်၊ ညနေပိုင်းကလည်း ယင်းမြို့နယ်၊ ကာပေါင်းရွာမှ ပြန်လာသော အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်းမှ နောက်ဆုံးယာဉ်လေးစီးကို လမ်းတစ်နေရာတွင် မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးသည်။
တန့်ဆည်စခန်းထဲသို့ ဝင်ထွက်သွားလာနေသော ဒလန်းများ၊ ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအနေနှင့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့်ပေါင်း၍ ပြည်သူလူထုကို ဒုက္ခပေးရန်ကြိုးပမ်းပါက ယင်းသို့ သုတ်သင်ရှင်းလင်းမည်ဟု တန့်ဆည်ပြည်သူ့ရဲဘော်အဖွဲ့က ဆိုသည်။ ပြည်သူများအနေနှင့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သား၊ ရဲများနှင့် ဆက်ဆံခြင်းမပြုရန်၊ စစ်ယာဉ်တန်းဝန်းကျင်တွင် သွားလာနေထိုင်ခြင်းမပြုရန်၊ ည ၉နာရီနောက်ပိုင်း အပြင်မထွက်ရန်၊ မသင်္ကာဖွယ်ပစ္စည်းများကို ကိုင်တွယ်ခြင်းမပြုရန် စသည့် အချက် ၇ချက်ပါ သတိပေးစာကို ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းတွင် ယင်းအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယင်းအဖွဲ့ကို မေလ ၂၉ရက်က စတင်ဖွဲ့စည်းပြီး စစ်ကောင်စီ၏ လက်ပါးစေ၊ သတင်းပေးများကို ရှင်းလင်းရန်၊ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ ထောက်တိုင်များကို ဖြိုချရန်၊ မြို့နယ်အတွင်း ပြည်သူလူထုကို ဖိနှိပ်နေသော စစ်ကောင်စီကို ခုခံတွန်းလှန်ရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယင်းအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။